XOG LA HELAY: Puntland oo heshiis saameyn xooggan ku leh DF Somaliya la gashay Shirkadda Blackwater. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG LA HELAY: Puntland oo heshiis saameyn xooggan ku leh DF Somaliya...
XOG LA HELAY: Puntland oo heshiis saameyn xooggan ku leh DF Somaliya la gashay Shirkadda Blackwater.
Muqdisho (Halqaran.com) – Shirkada Blackwater ayaa mar kale soo laba kacleysay marka loo Eego hanqal taageeda Soomaaliya iyo Mashaariicda ay ka fulineyso.
Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo dalka ka maqan ayaa waxa la sheegay in uu soo xir xiray Mashaariicyo dhaqaale badan Puntland ku heleyso.
Sida muuqata waxay Mar kale jebisey Puntland Amar kasoo baxay Dawlada Dhexe oo ahaa in Ajaanib lala geli Karin Heshiis oo aysan Dawlada Federaalka waxba ka ogeyn.
Amarkaasi ayaa bilo ka hor waxaa ka dhawaajiyey Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Maxamed cabdi Xayir (Maareeye) balse warkiisa waxaa laga dhigay mid aan waxba kasoo bixin.
Shirkada Blackwater ayaa shirkad ka farcantay oo Shiinaha laga leeyahay dhanka amniga iyo lojiistikadana qaabilsan ayaa lagu wareejiyey Garoonka Diyaaradaha Garowe ee General Maxamed Abshir Haamaan.
Shirkada Qandaraaska qaadatay waxaa lagu magacaabaa Frontier Service Group, waxaana Xerada Xalane oo kale ay ka hirgelin doonaan Garoonka Diyaaradaha Garowe.
Heshiiskaasi waxaa Puntland ay sheegtay inay ku faraxsan tahay waxaana goob joog ka ahaa meesha lagu saxiixay Madaxweyne ku-xigeenka Axmed Karaash.
Si kastaba, Blackwater ayaa lagu xantaa inay weeraro Amni daro iyo qaraxyo ka fulisey gudaha Soomaaliya,Qarax lagu dili lahaa Fu’aad Shongole 2010-kii ayaa lagu Eedeeyey inay ka dambeysay Qaraxaas oo ka dhacay Masjidka Cabdalla shideeyaha Muqdisho.
Puntland oo heshiis la gashay Shirkadda Blackwater
axmed December 2, 2019 At 13:14
Shaqa kuma laha , Puntland dowladda xamar , ee dhiciifka ahi ka madax yahay, lagana yeeli mayo wax ha qabsanina, Jidka afgooye iyo Xamar haka xoreeyo argagixisada, dekedana cashuur ka qaada,